The Kpop Times - လပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ရသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့် D.O.
လပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ရသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့် D.O.
EXOအဖွဲ့ဝင် D.O. ဟာ အာကာသအခြေခံ ရုပ်ရှင်အသစ်မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ "The Moon" လို့ ယာယီနာမည်ပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ မင်းသား ဆောဂျောင်းဂူ နဲ့ D.O. တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် လပေါ်မှာတစ်ယောက်တည်းကျန်နေခဲ့ရတဲ့လူ (D.O)ကို ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ အခြားသူ(ဆောဂျောင်းဂူ)က ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ အကြောင်းရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး 'Take Off', 'Along with the Gods: the Two Worlds' နဲ့ 'Along with the Gods: the Last 49 Days'ရုပ်ရှင်တွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Kim Yong Hwa က ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် D.O. ဟာ ဒါရိုက်တာ ကင်ယုံဟွာ နဲ့ 'Along with the Gods' စီးရီးအပြီး တတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ပြန်လည်တွေ့ဆုံတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ ပူးပေါင်းမှုကောင်းကောင်းနဲ့ တွဲဖက်မှုကို တွေ့မြင်ချင်နေကြပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ D.O. (Do Kyung-Soo)ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၂၅ရက်နေ့မှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကို ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပြီး “The Moon”ရုပ်ရှင်ကိုတော့ နောက်နှစ် နှစ်ဝက်မှာ စတင်ရိုက်ကူးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
D.O. နဲ့ နမ်ဂျီယောင်းတို့ပါဝင်မယ့် 'The King's 100 Days’ ဇာတ်လမ်းတွဲ
မကြာမီ tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်တော့မယ့် EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. နဲ့ နမ်ဂျီယောင်းတို့ရဲ့ ဒရမ်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်အချက်တချို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
'100-Day Husband' ဒရမ်မာတွင် D.O. နှင့်အတူ ဦးဆောင်ပါဝင်ရန် မင်းသမီး နမ်ဂျူယောင်း ကို ကမ်းလှမ်းထား
မင်းသမီးနမ်ဂျူယောင်းဟာ '100-Day Husband' ဒရမ်မာမှာ အဓိကမင်းသမီးအနေနဲ့ ပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သမိုင်းနောက်ခံဒရမ်မာမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသား အဖြစ် EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ပါဝင်မယ်
EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ဟာ မကြာမီ tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ တင်ဆက်မယ့် ဒရမ်မာမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ ပါဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။